ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကို လေ့လာရန် သင့်ကိုယ်သင် စုစည်းပုံ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 12/01/2022 10:32 | အကြံပေးချက်များ
လေ့လာမှုသည် လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော အမြင်များကို ရရှိသည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် သူနှစ်သက်သည့်ဘာသာရပ်တစ်ခု၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သောအခါတွင် သူသည် အခက်အခဲတွေ့သော အကြောင်းအရာများကို ကျော်တက်သောအခါထက် ပိုမိုပျော်ရွှင်မှုရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အဖွဲ့အစည်းသည် သင်တန်းကာလအတွင်း လေ့လာမှုရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန် အောင်မြင်မှု၏သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။။ ဘယ်လိုလဲ လေ့လာရန်စီစဉ်ပါ။ ဘာသာရပ်များစွာ? ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ပို့စ်တွင် အကြံဉာဏ်အချို့ပေးပါသည်။
1 1. ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက် အချိန်ပမာဏကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
2 2. ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် လေ့လာမှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြုပါ။
3 3. ကောင်းမွန်သောမှတ်စုများယူပါ။
4 4. နေ့စဉ်နှင့်အဆက်မပြတ်လေ့လာပါ။
5 5. စာမေးပွဲရက်များ
6 6. ပစ္စည်းကို မှာယူပါ။
1. ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက် အချိန်ပမာဏကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
လက်တွေ့ကျင့်သုံးသင့်သော စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအခက်အခဲအဆင့်ကိုတင်ပြသောဘာသာရပ်များကိုလေ့လာပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မိနစ်ပိုအချိန်ပေးပါ။ စာသင်ချိန်ကို နောက်ပိုင်းတွင် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သောအခါ ရှုပ်ထွေးသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး မကြာခဏ ထပ်ခါထပ်ခါ မဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ ဥပမာ, နေ့ခင်း သို့မဟုတ် နံနက်ခင်းတွင် နေရာပိုပေးရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာဖြင့် စတင်ပါ။.
2. ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် လေ့လာမှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြုပါ။
အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း မတူညီသောအကြောင်းအရာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည် အဓိကဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသား သဘောတရားများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော လေ့လာမှုနည်းစနစ်များသည် သင်ယူမှုကို အားဖြည့်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဇယားကွက်များ၊ စိတ်ကူးမြေပုံများနှင့် အနှစ်ချုပ်များသည် အဆင်ပြေပါသည်။. ဒါပေမယ့်လည်း စာသားရဲ့ အဓိက စိတ်ကူးတွေကို အမြင်နဲ့ ဘောင်ခတ်ထားတာကြောင့် သူတို့ကို အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်တာကြောင့် မျဉ်းသားထားပါတယ်။
သင်၏သင်ယူမှုအစီအစဉ်အတွင်း သင်နှင့်အတူလိုက်မည့် အရင်းအမြစ်များစာရင်းကို ယူပါ။ မှတ်စုများသည် စာအုပ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့် အကြောင်းအရာများအတွက် စံပြဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။ အဓိက အယူအဆများကို အလေးပေးသော မှတ်ချက်များသည် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။. အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်များမှ လေ့လာရန် အကြံပြုထားသည်။
ရေတိုနှင့်ရေရှည်တွင် အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းတစ်ခု ရှိသည်- စာမေးပွဲမဖြေမီ တစ်ရက်အလိုတွင် လေ့လာမှုအား ချန်ထားခဲ့သည်။ သို့သော် ဘာသာရပ်များစွာကို ခေတ်မီစေရန် ရက်သတ္တပတ်များတစ်လျှောက်လုံး လိုက်လျောညီထွေရှိရန် အရေးကြီးသည်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက် အချိန်နှင့် နေရာတစ်ခုကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။ ပြက္ခဒိန်တစ်ခုဖန်တီးပြီး လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို မျှော်လင့်ရန် နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ လာမည့်ရက်အနည်းငယ်မှ ဤပြက္ခဒိန်သည် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ဖြစ်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများအတွက် ဖွင့်ထားရပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အပြောင်းအလဲများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် သင်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။
ဒီနေ့အတွက် မင်းရဲ့ အစီအစဉ်က ဘာလဲ။ မနက်ဖြန်အထိ မထားခဲ့ပါနဲ့။
လေ့လာမှုအား စီစဉ်သည့်အခါ မတူညီသော ကဏ္ဍများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ပထမဦးစွာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်တစ်ခုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ထိုမျှော်လင့်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။ သို့သော်ငြားလည်း, စာမေးပွဲရက်စွဲများသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထူးသက်ဆိုင်မှုရှိသည်။. ဥပမာအားဖြင့်၊ လာမည့် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့ရက်များတွင်၊ ဘာသာရပ်ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါ။
6. ပစ္စည်းကို မှာယူပါ။
ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကို လေ့လာခြင်းသည် အကောင်းဆုံးအချိန်ကို စီစဉ်ရန် လိုအပ်သည်။ စည်းစနစ်ကျသော လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို ဖန်တီးရာတွင် အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းအောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ကျောင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရမည်။ လေ့လာမှုအကြောင်းအရာကို ဂရုစိုက်ပြီး မတူညီသောဘာသာရပ်များ၏ မှတ်စုများကို မှာကြားပါ။.
စာအုပ်စင်သည် စားပွဲခုံကို ပြီးပြည့်စုံစေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော လေထုကို ဖန်တီးရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပရိဘောဂတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ စားပွဲအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင်တိုင်ပင်လိုသည့် အချက်အလက်များ၏ရင်းမြစ်များကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဘာသာရပ်အားလုံးကို လေ့လာဖို့ အချိန်မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ ထင်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့အားလုံးကို လက်လွှတ်မခံပါနဲ့။ ဘယ်ပန်းတိုင်ကို အာရုံစိုက်ချင်သလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကို လေ့လာရန် သင့်ကိုယ်သင် မည်သို့စီစဉ်မည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » အကြံပေးချက်များ » ဘာသာရပ် အသီးသီးကို လေ့လာရန် သင့်ကိုယ်သင် စည်းရုံးနည်း